Dနေမင်း(နည်းပညာ): ♪ Hacker တွေရဲ့ရန်မှာကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် - UnHack Me 7.55 build 455 + Serial Key ♫
♪ Hacker တွေရဲ့ရန်မှာကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် - UnHack Me 7.55 build 455 + Serial Key ♫
Software နာမည်နဲ့တင်သေလောက်တယ်ဗျာ UnHackMe တဲ့။ သူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ Software အကူအညီနဲ့ Attack လုပ်တဲ့ Hacker တွေရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ခြုံ ငုံပြီးပြောရင် ပိုမှန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ကွန်နရှင်ရှိတဲ့စက်တွေ နဲ့ Network ချိတ်ဆက်ထား တဲ့စက်တွေမှာ ရှိထားသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မိမိကို Hack သွားနိုင်တဲ့ Rootkits နဲ့ Trojan Virus အမျိုးအစားတွေကို အကောင်းဆုံး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ သတိဆိုတာ ပိုတယ်လို့မရှိ ပါဘူးဗျာ။ မိမိရဲ့ စက်ထဲမှာ Install လုပ်ထားရုံနဲ့ မိမိမှာရှိတဲ့ Personal Data တွေ User Name နဲ့ Password တွေ အခိုးမခံရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် 100% Hack မခံရအောင်လို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့တော့ အာမမခံရဲဘူးဗျ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Hacking ပညာရပ်ကလည်း ကျွန်တော်တို့တွေင်ထားတာထက်ပိုပြီး နက်နဲတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပါ။ ပညာရှင်တွေကလည်း သူ့ထက်ငါ လူစွမ်းကောင်းတွေချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သာမန်မရှိဘဲနေတာထက်တော့ ပိုပြီး လုံခြုံမှုရှိတာ အမှန်ပါပဲဗျာ။ အမြဲတမ်း သုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Serial Key ကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ် ဗျာ။ Windows 8/8.1//7/Vista/XP (32-bit/64-bit) စတဲ့ OS တွေမှာအသုံးပြု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုလေ့ လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Greatis Software UnHackMe 7.55 build 455 final release - Protecting your computer from hackers and spyware has never easier. With this powerful protection software you will prevent hackers, spyware and unauthorized actions from accessing your computer. What makes UnHack me better than antivirus programs is significant protection of your personal data. This light-weight security program secure your personal information, blocks rootkits, malware and prevents unwanted access or personal info stealing.
--->UnHack Me 7.55 Features<---
- The most convenient way to protect from hackers includes maximum protection from the following threats: viruses, worms, adware, rootkits, trojans, spyware, backdoor programs, unwanted and useless programs.
- Easily and safely scan, detect and remove threats by clicking on "Check Me Now!" button, you will run full scan to detect and remove potential unwanted programs, scan startup programs, services and unwanted files.
- Startup programs are loaded automatically at every Windows boot-up. Remove malicious and useless programs from start-up to speedup your computer.
- The system service isaprogram that works in background, some of those services don't belong to Windows OS and could be suspicious.
- Use "RegRun Reanimator" tool is also included to runacomprehensive scan to detect suspicious programs, detect spyware and malware infections and fix problems.
- UnHack Me 7.5 crack, UnHack Me 7.55 activation key, UnHack Me 7.5 patch keygen.
- UnHack Me 7.5 free download is compatible with Windows7(32-64 bit), Windows 8/8.1 (32-64 bit), Windows Vista (32-64 bit), Windows XP (32-64 bit).
Posted by Thu Rein at 6:36 AM